Mazana Mazuva – Kubiridzira&Kugura – Android Cheats Matipi
Mazana Mazuva – Kubiridzira&Kugura
Na admin | Gumiguru 15, 2021
Tizira kumaruwa uye kunhuwa minda yePiemonte!
Iva ishe wezvauchawira uchishanda nemaoko nemazambiringa, mbiya uye kazhinji kako bhodhoro label!
MuMazana Mazuva iwe unenge uine kutonga kwakazara kwebhizinesi idzva. Nokusarudza pokutangira chaipo, iwe unotanga rwendo rwebhizinesi rako uye wova mogul weindasitiri nekusarudza kuti ndechipi chigadzirwa chaunogadzira. Nekuchengeta mhepo pakuda kwemusika, iwe unogona zvakare kuwedzera bhizinesi rako kuburikidza nekutengesa uye kukura.
Sezvakaita munyika chaiyo, sarudzo dzose dzaunoita, kubva pakushanda pachivanze kusvika pakutengesa kongiri, inogona kukanganisa huwandu uye kunaka kwechigadzirwa chaunogadzira. Chigadzirwa chemhando yepamusoro chinovandudza mukurumbira wako weindasitiri, pasinei nemutengo wepamusoro wekushanda, zvichabatsira kukura kwako munguva pfupi.
Mazana Mazana mutambo we tycoon une rondedzero yekumonyorora, inopa matatu akasiyana emitambo modes kuti aenderane nemapalate mazhinji. Kubva pakutanga kusvika kune nyanzvi, mutambo uyu wekutevedzera uchakuvaraidza iwe uchivandudza kunzwisisa kwako kwese kweiyi millenary tsika uye kukosha kwayo kwetsika.
– "Dzidza" iyo yese yekugadzira waini uye unzwisise kukosha kwezvinhu zvakasiyana uye zvinhu zvinopinda mukugadzira bhodhoro rakayerwa zvakanyanya., kuburikidza nekutambira kuravira kwewaini!
– “Chengeta” munda wako wemizambiringa nekurima marudzi akasiyana emuzambiringa uye kudzidza nezvemhando yevhu uye mamiriro ekunze anoenda mumatanho akadai sekuchekerera, fertilization, uye kukohwa.
– "Hands-on" kuedza nekucheka-kumucheto winemaking maitiro uye zvishandiso, kuenzanisa pakati peunyanzvi neunyanzvi.
– "Tonga" uye ukure bhizinesi rako, gadzira yako yega nzira yekutengesa uye shandisa kushambadzira kuziva-maitiro kuvaka mukurumbira wako muindasitiri.
– "Adventure" uye akasiyana modhi inobvumira kureba kana kupfupika mutambo wemitambo, tsvaga kana iwe uchikwanisa kumhanyisa humambo hwewaini padivi!
Join Discord yedu: https://discord.gg/kUhvSFNA6Z
Chikamu: Kubiridzira uye Kubiridzira kana Matipi Matagi: CheatsHack, Days
← Competitions & Challenge Game – Kubiridzira&Kugura Doll Roll Survival Game – Kubiridzira&Kugura →